12.02.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– सत्यको सङ्ग ज्ञानमार्गमा नै हुन्छ , अहिले तिमी सत् य बाबाको सङ्गमा बसेका छौ , बाबाको यादमा रहनु अर्थात् सतसङ्ग गर्नु।”
सतसङ्गको आवश्यकता तिमी बच्चाहरूलाई अहिले नै छ, किन?
किनकि तमोप्रधान आत्मा एक सत्य बाबा, सत्य शिक्षक र सद्गुरुको सङ्गले नै सतोप्रधान अर्थात् कालोबाट गोरो बन्न सक्छ। बिना सतसङ्ग निर्बल आत्मा बलवान बन्न सक्दैन। बाबाको सङ्गले आत्मामा पवित्रताको बल आउँछ, २१ जन्मको लागि उसको बेडा पार हुन्छ।
बच्चाहरू सतसङ्गमा बसेका छन्, यस सत्यको सङ्गमा कल्प-कल्प संगममा बच्चाहरू नै बस्छन्। दुनियाँले त यो जान्दैन, सत्यको सङ्ग केलाई भनिन्छ। यो सतसङ्ग नाम अविनाशी रूपमा चल्दै आउँछ। भक्तिमार्गमा पनि भन्छन्– हामी फलानो सतसङ्गमा जान्छौं। वास्तवमा भक्तिमार्गमा कोही सतसङ्गमा जाँदैनन्। सतसङ्ग हुन्छ नै ज्ञान मार्गमा। अहिले तिमी सत्यको सङ्गमा बसेका छौ। आत्माहरू सत्य बाबाको सङ्गमा बसेका छन्। अरू कुनै पनि ठाउँमा आत्माहरू परमपिता परमात्माको सङ्गमा बस्दैनन्। बाबालाई चिनेका छैनन्। भन्न त भन्छन् हामी सतसङ्गमा जान्छौं तर उनीहरू देह अभिमानमा आउँछन्। तिमी देह अभिमानमा आउँदैनौ। तिमीले सम्झन्छौ– हामी आत्मा हौं, सत्य बाबाको सङ्गमा बसेका छौं। अरू कुनै पनि मानिसहरू सत्यको सङ्गमा बस्न सक्दैनन्। सत्यको सङ्ग– यो नाम पनि अहिले नै हुन्छ। सत्यको सङ्ग– यसको यथार्त रीतिले अर्थ बाबाले बसेर सम्झाउनु हुन्छ। तिमी आत्माहरू अब परमात्मा बाबा जो सत्य हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा बसेका छौ। उहाँ सत्य बाबा, सत्य टिचर, सद्गुरु हुनुहुन्छ। अर्थात् तिमी सतसङ्गमा बसेका छौ। फेरि चाहे यहाँ वा घरमा बसेका छौ तर आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्दै गर। हामी आत्माहरूले अहिले सत्य बाबालाई याद गरिरहेका छौं अर्थात् सत्यको सङ्गमा छौं। बाबा मधुवनमा बस्नुभएको छ। बाबालाई याद गर्ने युक्तिहरू पनि अनेक प्रकारका मिल्छन्। यादले नै विकर्म विनाश हुन्छ। यहाँ पनि बच्चाहरूले जानेका छन्– हामी १६ कला सम्पूर्ण बन्छौं फेरि उत्रिँदा-उत्रिँदा कला कम हुँदै जान्छ। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी हुन्छ फेरि गिर्दा-गिर्दा व्यभिचारी भक्ति हुनाले तमोप्रधान बन्छन् फेरि उनलाई सत्यको सङ्ग अवश्य चाहिन्छ। नत्र पवित्र कसरी बन्ने? त्यसैले अब तिमी आत्माहरूलाई सत्य बाबाको सङ्ग मिलेको छ। आत्माले जान्दछ– हामीले बाबालाई याद गर्नु छ, उहाँकै सङ्ग छ। यादलाई पनि सङ्ग भनिन्छ। यो हो सत्यको सङ्ग। यो देह हुँदा-हुँदै पनि तिमी आत्माहरूले मलाई याद गर, यो हो सत्यको सङ्ग। जसरी भन्ने गर्छन्, यिनलाई ठूलो मानिसको सङ्ग लागेको छ, त्यसैले देह अभिमानी बनेका छन्। अहिले तिम्रो सङ्गत छ सत्य बाबाको साथमा, जसबाट तिमी तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ– म एकै पटक आउँछु। अहिले आत्माको परमात्मासंग सङ्ग हुनाले तिमी २१ जन्मको लागि पार जान्छौ। फेरि तिमीलाई देहको सङ्ग लाग्छ। यो पनि ड्रामा बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मसँग तिमी बच्चाहरूको सङ्गत हुनाले तिमी सतोप्रधान बन्छौ, जसलाई गोल्डन एजेड भनिन्छ।
साधु-सन्त आदिले त सम्झन्छन्– आत्मा निर्लेप छ, सबै परमात्मा नै परमात्मा हुन्। त्यसैले यसको अर्थ भयो परमात्मामा मैला परेको छ। परमात्मामा त मैला पर्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ– के म परमात्मामा मैला पर्न सक्छ? सक्दैन। म त सदैव परमधाममा रहन्छु किनकि मलाई त जन्म मरणमा आउनु छैन। यो तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, तिमीहरूमा पनि कसैको सङ्ग बढी छ, कसैको कम छ। कोही त राम्रोसँग पुरुषार्थ गरेर योगमा रहन्छन्, जति समय आत्माले बाबाको सङ्गत गर्छ त्यति फाइदा हुन्छ। विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– हे प्यारा आत्माहरू! म बाबालाई याद गर, मेरो सङ्गत गर। मलाई यो शरीरको आधार त लिनुपर्छ। नत्र परमात्माले बोल्नुहुन्छ कसरी? आत्माले सुनोस् कसरी? अहिले तिमी बच्चाहरूको सङ्गत छ सत्यको साथमा। ससत्य बाबालाई निरन्तर याद गर्नु छ। आत्मालाई सत्यको सङ्गत गर्नु छ। आत्मा पनि आश्चर्यजनक छ, परमात्मा पनि आश्चर्यजनक हुनुहुन्छ, दुनियाँ पनि आश्चर्यजनक छ। यो दुनियाँले कसरी चक्कर लगाउँछ, आश्चर्य छ। तिमीले सारा ड्रामामा अलराउण्ड पार्ट बजाउँछौ। तिम्रो आत्मामा ८४ जन्मको पार्ट निश्चित छ– आश्चर्य छ। सत्ययुगी आत्माहरू र आजभोलीका आत्माहरू। त्यसमा पनि तिम्रो आत्मा सबैभन्दा बढी अलराउण्ड छ। नाटकमा कसैको सुरुदेखिको पार्ट हुन्छ, कसैको बीचदेखि, कसैको अन्त्यतिर पार्ट हुन्छ। ती हुन् सबै हदका ड्रामा, त्यसमा पनि ती अहिले निस्केका हुन्। अब साइन्सको यति जोड छ। सतयुगमा उनको बल कति हुन्छ। नयाँ दुनियाँ कति चाँडै बन्छ होला। त्यहाँ पवित्रताको बल मुख्य हुन्छ। अहिले छ निर्बल। त्यहाँ हुन्छन् बलवान। यी लक्ष्मी-नारायण बलवान छन् नि। अहिले रावणले बल छिनेको छ फेरि तिमी त्यस रावणमाथि विजय प्राप्त गरेर कति बलवान बन्छौ। जति सत्यको सङ्ग गर्छौ अर्थात् आत्माले जति सत्य बाबालाई याद गर्छ त्यति बलवान बन्छ। पढाइमा पनि बल त मिल्छ नि। तिमीलाई पनि बल मिल्छ, सारा विश्वमा तिमीले हुकुम चलाउँछौ। आत्माको सत्यको साथमा योग संगममा नै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– आत्मालाई मेरो सङ्ग मिलेपछि आत्मा धेरै बलवान हुन्छ। बाबा सर्व शक्तिमान् हुनुहुन्छ नि, उहाँबाट बल मिल्छ। यसमा सबै वेद-शास्त्रहरूको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान आउँछ।
जसरी बाबा सर्व शक्तिमान् हुनुहुन्छ, तिमी पनि सर्व शक्तिमान् बन्छौ। विश्वमा तिमीले राज्य गर्छौ। तिमीबाट कसैले छिन्न सक्दैन। तिमीलाई मद्वारा कति बल मिल्छ, यिनलाई पनि बल मिल्छ, जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति बल मिल्छ। बाबाले अरू कुनै दु:ख दिनुहुन्न। केवल याद गर्नु छ, पुग्यो। ८४ जन्मको चक्र अब पूरा हुन्छ, अब फर्केर जानु छ। यो बुझ्न कुनै ठूलो कुरा छैन। बढी विस्तारमा जाने आवश्यकता छैन। बीजलाई जानेपछि बुझिन्छ– यसबाट नै सारा वृक्ष निस्किन्छ। सार बुद्धिमा आइहाल्छ। यी धेरै विचित्र कुरा छन्। भक्ति मार्गमा मनुष्यहरूले कति धक्का खान्छन्। मेहनत गर्छन्, तर केही पनि मिल्दैन। फेरि पनि बाबा आएर तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ। हामी योगबलले विश्वको मालिक बन्छौं, यही नै पुरुषार्थ गर्नु छ। भारतको योग प्रख्यात छ। योगले तिम्रो आयु कति लामो हुन्छ। सत्यको सङ्गले कति फाइदा हुन्छ, आयु पनि लामो र काया पनि निरोगी बन्छ। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा बसाइन्छ। तिमी ब्राह्मणहरू बाहेक अरू कसैको पनि सत्यको साथमा सङ्गत छैन। तिमी प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हौ, नाती-नातिना हौ। त्यसैले यति खुसी हुनुपर्छ नि, हामी नाती-नातिना हौं। वर्सा हजुरबुवाबाट मिल्छ, यो नै यादको यात्रा हो। बुद्धिमा यही स्मृति रहनु पर्छ। ती सतसङ्गमा त एक ठाउँमा गएर बस्छन्, यहाँ त्यो कुरा छैन। यस्तो होइन, एक ठाउँमा बस्नाले नै सत्यको सङ्ग होला। होइन, उठ्दा-बस्दा, हिँड्दा-डुल्दा हामी सत्यको सङ्गमा हुन्छौं, यदि उहाँलाई याद गर्छौ भने। याद गर्दैनौ भने देह अभिमानमा छौं, देह त असत्य चीज हो नि। देहलाई सत्य भनिदैन। शरीर त ५ तत्त्वले बनेको जड हो, त्यसमा आत्मा हुँदैनथ्यो भने चलमलाउने थिएन। मनुष्यको शरीरको त मूल्य छैन, अरू सबैको शरीरको मूल्य हुन्छ। सौभाग्य त आत्मालाई मिल्नु पर्छ, म फलानो हुँ, आत्माले भन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ– आत्मा कस्तो भएको छ! अण्डा, कछुवा, गोही सबै खाइदिन्छ। हरेक भस्मासुर छन्, आफूलाई आफैंले भस्म गर्छन्। कसरी? काम चितामा बसेर हरेकले आफूलाई भस्म गरिरहेका छन्। त्यसैले भस्मासुर ठहरिए नि। अहिले तिमी ज्ञान चितामा बसेर देवता बन्छौ। सारा दुनियाँ काम चितामा बसेर भस्म भएको छ, तमोप्रधान, कालो भएको छ। बाबा आउनु हुन्छ बच्चाहरूलाई कालोबाट गोरो बनाउन। त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ– देह अभिमानलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। बच्चाहरूले स्कुलमा पढ्छन् फेरि घरमा बस्दा पनि बुद्धि त पढाइमा रहन्छ नि। यो पनि तिम्रो बुद्धिमा रहनु पर्छ। यो हो तिम्रो विद्यार्थी जीवन। लक्ष्य-उद्देश्य सामुन्ने खडा छ। उठ्दा, बस्दा, हिँड्दा बुद्धिमा यो ज्ञान रहनु पर्छ।
यहाँ बच्चाहरू आउँछन् रिफ्रेस हुन्छन्। युक्तिहरू सम्झाइन्छ– यसरी-यसरी सम्झाऊ। दुनियाँमा अनगिन्ती सतसङ्ग छन्। कति मनुष्यहरू आएर जम्मा हुन्छन्। वास्तवमा त्यो सत्यको सङ्ग त होइन। सत्यको सङ्ग त अहिले तिमी बच्चाहरूलाई नै मिल्छ। बाबाले नै आएर सत्ययुगको स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमी मालिक बन्छौ। देह-अभिमान अथवा झूटो अभिमानले तिमी गिर्छौ र सत्यको सङ्गले तिमी चढ्छौ। आधाकल्प तिमीले प्रारब्ध भोग्छौ। यस्तो होइन, त्यहाँ पनि तिमीलाई सत्यको सङ्ग हुन्छ। हुँदैन, सत्यको सङ्ग र झुटको सङ्ग तब भनिन्छ जब दुवै हाजिर हुन्छन्। सत्य बाबा जब आउनु हुन्छ, उहाँले नै आएर सबै कुरा सम्झाउनु हुन्छ। जबसम्म उहाँ सत्य बाबा आउनुहुन्न तबसम्म कसैले जान्न पनि जानेका हुँदैनन्। बाबा तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ– हे आत्माहरू, मेरो साथमा सङ्गत गर। देहको जुन सङ्ग मिलेको छ, त्यसबाट उपराम होऊ। देहको सङ्ग हुन त सत्युगमा पनि हुन्छ तर त्यहाँ तिमी हुन्छौ नै पावन। अहिले तिमी सत्यको सङ्गले पतितबाट पावन बन्छौ फेरि शरीर पनि सतोप्रधान मिल्छ। आत्मा पनि सतोप्रधान हुन्छ। अहिले त दुनियाँ पनि तमोप्रधान छ। दुनियाँ नयाँ र पुरानो हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा वास्तवमा आदि सनातन देवी-देवता धर्म थियो। आज त्यस धर्मलाई गुम गरेर आदि सनातन हिन्दु धर्म भनिदिन्छन्, अलमलिएका छन्। अहिले तिमीहरूले सम्झन्छौ– हामी प्राचीन देवी-देवता धर्मका थियौं। सतयुगका मालिक थियौं। तर त्यो नशा कहाँ छ? कल्पको आयु नै लामो लेखेका छन्। सबै कुरा भुलेका छन्। यसको नाम नै भूल भुलैयाको खेल हो। अहिले सत्य बाबाद्वारा तिमीले सारा ज्ञान जान्नाले उच्च पद पाउँछौ फेरि आधा कल्पपछि तल गिर्छौ किनकि रावण राज्य सुरु हुन्छ। दुनियाँ पुरानो त हुन्छ नि। तिमीलाई थाह छ– हामी नयाँ दुनियाँको मालिक थियौं, अहिले पुरानो दुनियाँमा छौं। कसै-कसैलाई यो पनि याद रहदैन। बाबाले हामीलाई स्वर्गवासी बनाउनु हुन्छ। आधाकल्प हामी स्वर्गवासी रहन्छौं फेरि आधाकल्पपछि तल गिर्छौं किनकि रावण राज्य सुरु हुन्छ। दुनियाँ पुरानो त हुन्छ नि। तिमीलाई थाहा छ– बाबाले हामीलाई स्वर्गवासी बनाउनु हुन्छ। आधाकल्प हामी स्वर्गवासी रहन्छौं फेरि नर्कवासी बन्छौं। तिमी पनि मास्टर सर्व शक्तिमान् बनेका छौ, नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। यो हो ज्ञान अमृतको खुराक । शिवबाबालाई पुरानो शरीर मिलेको छ। नयाँ शरीर त मिल्दैन। पुरानो बाजा मिल्छ। बाबा आउनु हुन्छ पनि वानप्रस्थमा नै। बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ भने बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म आउँछु बच्चाहरूलाई ज्ञान दिएर रावणबाट छुटाउन। पार्ट त खुसीले खेलिन्छ नि। बाबाले धेरै खुसीले पार्ट खेल्नु हुन्छ। बाबालाई कल्प-कल्प आउनु पर्छ। यो पार्ट कहिल्यै बन्द हुँदैन। बच्चाहरू धेरै खुसी हुनु पर्छ। जति सत्यको सङ्गत गर्छौ त्यति खुसी हुन्छ, याद कम गर्छौ त्यसैले त्यति खुसी रहदैन। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्पत्ति दिनुहुन्छ। जुन बच्चाहरू सच्चा दिल भएका छन्, उनीहरूमा बाबाको धेरै प्यार हुन्छ। सच्चा दिलमा साहेब राजी हुनुहुन्छ। भित्र-बाहिर जो सच्चा रहन्छन्, बाबाको सहयोगी बन्छन्, सेवामा तत्पर रहन्छन् उनीहरू नै बाबालाई प्रिय लाग्छ। आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ– मैले सच्चा-सच्चा सेवा गर्छु? सच्चा बाबाको साथमा सङ्गत गर्छु? यदि सत्य बाबाको साथमा सङ्गत गर्दिनँ भने के गति होला? धेरैलाई मार्ग बताउँदै गयौ भने पद पनि उच्च पाउने छौ। सत्य बाबाबाट मैले के वर्सा पाएको छु, आफूभित्र हेर्नु छ। यो त जानेका छौ– नम्बरवार छन्। कसैले कति वर्सा पाउँछ कसैले कति। रात-दिनको फरक छ। अच्छा!
१) तिमीलाई जुन यस देहको सङ्ग मिलेको छ, यस सङ्गबाट उपराम रहनु छ। सत्यको सङ्गबाट पावन बन्नु छ।
२) यस विद्यार्थी जीवनमा हिँड्दा-डुल्दा बुद्धिमा ज्ञान घुमिरहोस्। लक्ष्य-उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ। सच्चा दिलले बाबाको सहयोगी बन्नु छ।
सत्ययुगी स्वभावद्वारा सत्ययुगी सेवा गर्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव
जुन बच्चाहरूको स्वभावमा ईर्ष्या, सिद्ध र जिद्दी गर्ने भाव अथवा कुनै पनि पुरानो संस्कारको मिसावट हुँदैन उनीहरू हुन् सत्ययुगी स्वभाव भएका। यस्ता सत्ययुगी स्वभाव र सदा ‘हुन्छ हजुर’ को संस्कार बनाउने श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चाहरू जस्तो समय, जस्तो सेवा त्यस्तै स्वयंलाई परिवर्तन गरेर सच्चा सुन बन्न पुग्छन्। सेवामा पनि अभिमान वा अपमानको मिसावट नहोस् तब भनिन्छ सत्ययुगी सेवा गर्नेवाला।
किन, के को प्रश्नहरूलाई समाप्त गरेर सदा प्रसन्नचित्त रहने गर।